MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA LANDSEER NEWFOUNDLAND - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Landseer Newfoundland
Lahaanshaha sawirka Ingrid Pakats
USA iyo Great Britain Landseer waxaa loo arkaa inay isku nooc yihiin Newfoundland , si kastaba ha noqotee wadamada Yurub qaarkood Landseer waa gebi ahaanba ka duwan kan Newfoundland. Wixii taranka this sidoo kale eeg Newfoundland
Landseer waa inuu gudbiyaa aragtida eey dheer, awood leh oo isku dheelitiran. Lugaha ayaa isbarbardhig ka dheer kuwa madow Newfoundland , gaar ahaan labka. Landseer waa xarrago, iswaafajin, deg deg badan oo adag. Afka ballaaran waa halkii gaabnaa oo laba jibbaaran. Dhagaha yaryar, saddex-geesoodka ah waa laalaab. Indhaha yaryari waa bunni mugdi ah iskuhu waa inuusan ka muuqan sida ka muuqata St. Bernard. Sanku waa madowyahay. Cagaha ayaa loo xiraa si loogu dabaasho wanaagsan. Baaqyada soo baxa waa in laga saaraa lugaha dambe. Dabada ayaa sudhan. Koodhka dhaadheer ee biyaha celiya waa mid fidsan, mid saliid leh oo wax yar ruxruxaya oo leh bushad qaro weyn oo subag leh. Eeyaha ku nool guriga gudihiisa, si kastaba ha noqotee, waxay u muuqdaan inay luminayaan jaantooda. Koodhka sare, marka laga reebo madaxa, waa inuu ahaado mid dheer oo toosan oo cufan intii suurtogal ah, jilicsanaanta taabashada, oo leh jaakad wanaagsan, oo aan u cufnayn sida madow ee Newfoundland. Koodh yar oo ruxruxsan oo gadaal iyo gadaal ah lama diidi karo. Markii si khaldan loo cadaadiyo waxay dib ugu noqotaa meeshii si dabiici ah. Midabka ugu weyn ee jaakadu waa cadaan cad oo leh nabarro madow oo kala duwan oo jirka iyo kuus kuus ah. Koolar, hore, caloosha, lugaha iyo dabada ayaa cad. Madaxa waa madow oo leh muuska cad iyo olol cad oo isku eg.
eyda ugu xun ee qaniinyada
Landseer waa eey leh dabeecad aad u wanaagsan waa mid wanaagsan, geesinimo leh, deeqsinimo leh oo caqli badan. Sidoo kale waa eey dulqaad badan, oo ku fudud martida, isla markaana ku caasiya sayidkiisa. Isagu waa gob, deggan, debecsan, aamin ah oo lagu kalsoon yahay dabeecad macaan. Sharaf leh oo nabdoon. Aad u go'ay Wanaagsan oo geesi ah. Caqli ku filan inuu kaligiis ku dhaqmo markii loo baahdo. Difaac, laakiin wuxuu u eg yahay inuu isku dhejiyo ku soo xadgudbay iyo qoyskiisa halkii ay ka ciyi lahaayeen ama guuxi lahaayeen. Dhulbixiyeyaashu way aqoonsan karaan xaalad khatar ah guud ahaanna way wax ka qaban doonaan haddii reerka loo hanjabo. Ey kasta, xayawaan kale , cunug, ama soo booqde aan ujeedo xun lahayn ayaa heli doona soo dhawayn saaxiibtinimo. Ragga qaar ayaa laga yaabaa inay dagaal la galaan ragga kale haddii milkiilayaashu aysan u joogin inay si habboon ula xiriiraan eeyga in xukunka uu yahay dhaqan aan loo baahnayn. Dulqaad badan, ciyaar leh, oo jacayl la leh carruurta. Aad u bulshey. Wuxuu ku raaxeystaa banaanka, laakiin wuxuu kaloo ubaahan yahay wehel. Landseer wuxuu cabbaa biyo aad u fara badan waana laga yaabaa inuu qasan yahay, maadaama uu jecel yahay inuu qoyo. Iyaga u janjeera , in kastoo aysan u badneyn sida kuwa kale noocyada waaweyn . In kasta oo eeydu u baahan yihiin cunto badan, Landseer qaangaar ah wuxuu cunaa oo keliya inta ugu badan ee loo yaqaan retriever. Waxay jecel yihiin inay dabaashaan oo haddii ay boorsada ku qaataan boorsada biyaha agteeda, ha u oggolaan Landseer inuu qaado boorsadaada jiifka — ama waxaad u hoyan kartaa habeen aad u qoyan! Noocani wuxuu noqon karaa wax yar oo adag in la tababaro. Eeyadan ayaa aad ugu nugul dhawaqa codkaaga. Tababbarka waa in lagu qabtaa a deggan, laakiin adag, kalsooni leh , joogto ah iyo hab miisaaman . Jirka weyn eeygan ayaa u muuqda inuu si tartiib tartiib ah u socdo. Tixgeli tan inta lagu jiro tababarka.
Dhererka: Ragga 28 ½ - 31 ½ inji (72 - 80 cm) Dumarka 26 ½ - 28 ½ inji (67 - 72 cm)
sern bernard iyo dahab isku dhaf ah
U nuglaanshaha dysplasia sinta Ha u oggolaan inuu Landseer cayilnaado. Sidoo kale u nugul cudur wadne la iska dhaxlo oo loo yaqaan 'sub-aortic stenosis' (SAS). Bixiyeyaashu waa inay yeeshaan qalbiyadii eey eey ka baaraan dhakhtarka wadnaha ee xoolaha 8-12 toddobaad markay jiraan. Dhulbixiyeyaasha Dadka Waaweyn waa in laga nadiifiyaa SAS markale kahor taranka.
Wax caadi ah kuma sameyn doono guri dabaq ah haddii jimicsi ku filan la sameeyo. Iyagu gudaha waxoogaa kama hawl galaan oo daarad yar ayaa ku filan. Waxay u nugul yihiin kuleylka: waxaad siisaa hooska badan iyo biyo qabow cimilada kulul. Eeyahaani waxay doorbidaan cimilo qabow.
10 sano ka yar
Qiyaastii 4 ilaa 12 eey
Caddaynta maalin kasta illaa toddobaadle ah ee qaro weyn, jilicsan, jaakad laba jibbaaran oo burush adag ayaa muhiim ah. Koodhka hoose waxaa la daadiyaa laba jeer sanadkii, guga iyo deyrta, waxaana loo baahan yahay taxaddar dheeraad ah xilliyadaas. (Waqtiga daadinta ugu culus waa gu'ga). Iska ilaali maydhashada haddii aan loo baahnayn, maxaa yeelay taasi waxay kaa fogeysaa saliidaha dabiiciga ah ee jaakadda Bedelkeeda, shaambo qalalan waqti ka waqti.
Asalka Landseer wuxuu ka soo bilaabmay Jarmalka iyo Switzerland. Waddanka USA iyo Great Britain Landseer-ka waxaa loo tixgeliyaa in ay isku nooc yihiin Newfoundland , si kastaba ha noqotee wadamada Yurub qaarkood Landseer waa gebi ahaanba ka duwan kan Newfoundland. Dhulbixiyeyaasha Yurub waxay leeyihiin lugo ka dheer kuwa Newfies Landseers ma ahan kuwa aad u ballaaran, waa eeyo isboorti badan. Riwaayadaha, si gooni ah ayey u tartamaan.
Newfoundland (Landseer) eeyo yar yar Willow 6 toddobaad
Newfoundland (Landseer) eeyo yaryar Willow 7 toddobaad
12 todobaadkii jir bulldog Maraykanka
Eeg tusaalayaal badan oo Landseer ah
Landseer Sawirada 1
madow iyo caddaan ey ey ah
basset hound jack russell iskudhaf
ingiriis dibi mastiff buuxa koray
dib u soo celinta dahabka isku-darka shaybaarka madow
puppy puppy puppy grey iyo cadaan
muxuu u egyahay iskudhafka feedhka feerka